पोखरासहित देशभरबाट हुन्डाई भेन्यू सार्वजनिक (भिडियो र विशेषतासहित) – Arthik Awaj
By आर्थिक आवाज २०७६ भाद्र ५ गते बिहीबार ०९:४८ मा प्रकाशित
पोखरा । हुन्डाईले आफ्नो चर्चित एसयूभी भेन्यू पोखरासहित देशभरबाट बिक्री शुभारम्भ गरेको छ । गण्डकी क्षेत्रको आधिकारिक बिक्रेता एल.आई. मोटर्सका निर्देशक सुनिल श्रेष्ठ, सुजल श्रेष्ठ र सेल्स एण्ड अपरेसन इन्चार्ज भीमसिंह खत्रीले बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच भेन्यूको बिक्री शुभारम्भ गरेका हुन् ।
हुन्डाईको बहुप्रतिक्षित यो गाडी नेपाली बजारमा निकै लोकप्रिय हुने कम्पनीको विश्वास छ । ‘बिक्री शुभारम्भ भएकै दिन भेन्युको अवलोकन गर्न ग्राहकहरुको भिड लागेको छ,’ खत्रीले भने, ‘पोखरा सहित देशभरको बजारमा भेन्युको बिक्री अत्याधिक हुने हामीले विश्वास लिएका छौं ।
नेपाली बजारमा ३४ लाख ९६ हजार सुरुवाती मूल्य रहेको भेन्यूको माथिल्लो मूल्य ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँसम्म छ ।
भारतमा केही महिनाअघि सार्वजनिक भएको भेन्यू तीनवटा इन्जिन अप्सन १.२ कप्पा पेट्रोल, १.० लिटर ३ सिलिन्टर टर्बोचाज्र्ड पेट्रोल र १.४ लिटर, फोर सिलिन्डर डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध छ ।
पोखरासहित देशभरबाट हुन्डाई भेन्यू सार्वजनिक
Gepostet von Arthik Awaj am Donnerstag, 22. August 2019